Lecrae ၏ဗီဒီယို, အဲရစ် Mason ဆို, နှင့်ခရီးစဉ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Lecrae ၏ဗီဒီယို, အဲရစ် Mason ဆို, နှင့်ခရီးစဉ်
ဤတွင် Lecrae ၏ဗီဒီယိုတင့်, အဲရစ် Mason ဆို, ငါ့ကိုဟစ်ဟော့နှင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုဆွေးနွေး
Pamela • သြဂုတ်လ 26, 2013 တွင် 3:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဲဒါကိုကြိုက်တယ်. သူတို့ထဲက ပို. ပို. ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်သ. သူတို့ကအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ဂီတကတဆင့်လူတွေဆီရောက်ဖို့. သို့မဟုတ်ငါသူတို့ရက်ပ်ကနေတဆင့်သိရှိစေရန်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံများကိုကိုအသုံးပြုဖို့ပြောရမည်.